२३ फागुनदेखि ज्येष्ठ नागरिकका लागि कोरोना खोप « Emakalu Online
२३ फागुनदेखि ज्येष्ठ नागरिकका लागि कोरोना खोप
झापा । सरकारले आगामी २३ फागुनदेखि ज्येष्ठ नागरिकका लागि कोरोना खोप अभियान सुरु गर्दै छ ।प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई त्यस अगाडी नै खोप दिने र ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप वितरणको तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको यो अभियानलाई स्वयम ज्येष्ठ नागरिकहरुले चाहिँ कसरी लिएका छन् त ?
गत बुधवार बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले २३ फागुनदेखि ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने निर्णय गरेको छ । यो उमेर समूहमा कुल २८ लाख जनसङ्ख्या रहेको अनुमान सरकारको छ ।
निकट भविष्यमा २० लाख खोप सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट खरिद गरेको भित्राइदैछ । कोभ्याक्स मार्फत समेत कोरोना खोप आउने भएकाले खोपको अभाव नहुने बताइएको छ । यसअघि मन्त्रालयले ५५ वर्ष माथिकालाई खोप दिने योजना अनुरूप आन्तरिक तयारी गरेको थियो ।
खोप व्यवस्थापनका लागि अहिले ६० वर्ष माथिका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसपछि भने ५५ वर्ष र त्योभन्दा कम उमेर समूहका मानिसहरूले खोप पाउने भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाईपनि सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भन्ने निर्णय सुन्दा स्वयम लाभग्राही अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ त ? यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले कत्तिको सम्मान गरेको महसुस भएको छ त ? झापा दमक ५ का ज्येष्ठ नागरिक कमल प्रसाद दाहाल भन्छन्“यो देशमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरेकै छ ।
कम्युनिस्ट सरकारले यस देशका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पहिलादेखीनै सम्मान गर्दै आएको र त्यसको निरन्तरता अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ । यसमा हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी छौँ ।”
यस्तै पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी परे पनि दोस्रोमा ज्येष्ठ नागरिक नपर्नु तर तेस्रो प्राथमिकतामा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरुनै पर्नुलाई उनीहरूले खसै ठुलो कुर नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
खोपको उपलब्धताका आधारमा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका कारण केही तलमाथि हुन जाँदैमा आत्तीहाल्नुपर्ने र रिसाईहाल्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको ज्येष्ठ नागरिक सम्मान प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम खतिवडा बताउँछन् ।
यस्तै झापा गौरादह ७ की ज्येष्ठ नागरिक महालक्ष्मी अधिकारी सरकारले ढिलै भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने निर्णय गर्नु सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछिन् ।
ज्येष्ठ नागरिक राज्यका गहना हुन् भन्ने कुरा सरकारले पहिला नै बुझ्नुपर्ने भए पनि ढिला आएरै भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपमा प्राथमिकतामा पार्नु एउटा सुखद कुरा भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं सञ्चारकर्मी पछि जोखिमका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन लागिएको हो । देशभरिका खोप केन्द्रबाट खोप लगाउने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोभीसिल्ड नामक खोप लगाउन लागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ यो खोप कस्तो हो भन्ने जानकारी खासै छैन । यद्यपि विश्वका धेरै देशहरू अहिले पनि खोपको खोजीमा भौतारिरहदा नेपालमा खोपको व्यवस्थापन हुनुलाई सरकारको सक्रियताका रूपमा उनीहरूले चित्रण गरेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्मान प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम खतिवडा भन्छन्, “आँप खानु त बोट नखोज्नु भनेझै सरकारले जसोतसो गरेर सक्रियता देखाएरै कोभिड विरुद्धको खोप ल्याई सकेको छ । त्यसैले के र किन अनि कसरी भनेर बस्ने भन्दा पनि खोप केन्द्रमा गएर ढुक्कले खोप लगाउँछौँ ।”
भारतबाट थप साढे २२ लाख डोज खोप किन्ने गरी सरकारले द्रुत प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ । यस्तै चीनले पाँच लाख खोप उपहारस्वरूप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कोभ्याक्स मार्फत पनि २० लाखभन्दा बढी खोप नेपालले पाउनेछ । अहिले भारतले दिएको १० लाख खोपमध्येबाट पहिलो प्राथमिकतामा रहेको जनशक्तिलाई खोप दिइँदै छ ।